CIN Khabar इनारको फोहोर पानी पिउँदै हरिहरपुरबासी
इनारको फोहोर पानी पिउँदै हरिहरपुरबासी बिरामी हुन्छन् तर, शुद्ध खानेपानी पाइँदैन
स्नेहा कर्ण बिहिबार, चैत १९, २०७७, ०७:५८:००
जनकपुर । जनकपुर उपमहानगरपालिकाबाट १८ किलोमिटर उत्तरमा पर्छ, मिथिला नगरपालिका । मिथिलाको एउटा गाउँ हो हरिहरपुर । जहाँ पिउने पानीको मुख्य स्रोत हो इनार ।
‘हम सब सबदिन इनारेके पानी पिबैछी । कलके या आरो किछो स पानी लाबि क केना पियै है से नै मालुम हब । अर्थात् हामी सबै जना सधैँ इनारकै पानी पिउँछौँ । कलको पानी वा अरु कुनै पानी कसरी खाने हामीलाई थाहा छैन ।’ यो भनाइ हो, उर्मिला देवीको ।
उहाँ उमेरले ६५ कट्नुभयो । विवाह गरेर हरिहरपुर आएको ५० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । बिहे गरेर आएदेखि इनारकै पानी पिउँदै आउनुभएको छ उहाँ । घरमा खाना पकाउने, पिउने, नुहाउनेदेखि सबै प्रयोजनका लागि उहाँ इनारकै पानी प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ । ‘इनारको पानी पिएरै होला सायद बिरामी पनि हुन्छु । पेटपनि दुःख्छ । तर, इनारको पानी पिउनुबाहेक अरु विल्कप छैन ।’ उर्मिलाले सुनाउनुभयो ।
‘इनारको पानी फोहोर हुन्छ । यो पानी खानु हुँदैन भनेर सबैले बुझेका पनि छन् । तर, शुद्ध खानेपानी कहाँबाट आउँछ ? त्यसकारण यही पानी खाने हो । ’, कुश्मीदेवी महतोले भन्नुभयो ।
‘इनार छोपेको हुँदैन । वर्षा हुँदा वा अन्य समय पनि हावा चल्दा सबै फोहोर इनारमा जान्छ । त्यही पानी पिउँछौँ । पेट दुःख्छ । बिरामी हुन्छौँ । तर, विकल्प छैन ।’ महतो सुनाउनुहुन्छ ।
६० वर्ष कटिसक्नुभएका मुजिबुल अन्सारीलाई इनारको पानी पिउने बानी परिसक्यो । बानी परेकै कारणले होला, उहाँ बिरामी हुँदा पनि पानीको कारण बिरामी भएँ भनेर कहिले सोच्नु हुन्न ।
६७ वर्षका मरनी देवी महतोले पनि आजसम्म शुद्ध पानी पिउन पाउनुभएको छैन । ९ जनाको परिवारलाई पिउने पानीको त खासै दुख छैन । तर सरसफाइका लागि आवश्यक पानीका लागि कहिलेकाँही हप्ता दिनसम्म कुर्नुपर्छ ।
‘कहिलेकाहीँ इनारको पानी पिउन पनि ३/४ दिन पनि कुर्नुपर्छ । अहिलेको फागुन, चैतको समय त ठीकै छ । लोडसेडिङ्ग हुँदा वा कुनै समय लामो समयसम्म बिजुली नुहँदा त्यो इनारकै पानी पिउन पनि समस्या हुन्छ ।’ मरनीदेवी थप्नुहुन्छ ।
उहाँले अहिले त पहिलेको भन्दा धेरै सहज भएको भन्दै बेलाबेला समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । बिरामी हुने, फोहोर पानी आउने समस्या त हुन्छ नै । भएको पानी पनि चाहिएको समय झिक्न नपाउँदा कसरी काम हुन्छ भन्ने चिन्ताले पनि उहाँलाई बेलाबेला सताउने गर्छ ।
‘स्थानीय सरकार गठन भएको साढे ३ वर्षभन्दा बढी बितिसके पनि नागरिकले शुद्ध खानेपानी पिउन पाएका छैनन् नि ? ’ यो प्रश्नमा वडाअध्यक्ष राम एकवाल महतोले अबको केही समयमै उनीहरूले शुद्ध खानेपानी पिउन पाउँछन् भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सीआईएनसँगको कुराकानीमा वडाध्यक्ष महतोले सकेसम्म ‘एक घर, एक इनार’ र खानेपानीका लागि धाराको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा दुई ठूला ट्याङ्की बनिसकेको र आगामी आर्थिक वर्षको सुरुसम्म सबैले शुद्ध खानेपानी पिउने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत १९, २०७७, ०७:५८:००